“Messi wuxuu ka yimid Duni kale, Ronaldo-na weli waa kan ugu fiican adduunka” – Mario Balotelli – Gool FM
“Messi wuxuu ka yimid Duni kale, Ronaldo-na weli waa kan ugu fiican adduunka” – Mario Balotelli
Dajiye May 9, 2019
(Europe) 09 Maajo 2019. Weeraryahanka kooxda Marseille ee Mario Balotelli ayaa wuxuu difaacay kabtanka Barcelona ee Lionel Messi, kaddib markii ay ka hareen tartanka Champions League.
Kooxda Barcelona ayaa guuldaro 4-0 ah kala kulantay dhigeeda Liverpool, kulankii ay Talaadada ku wada ciyaareen garoonka Anfield lugta labaad wareega afar dhamaadka tartanka Champions League, xili Barca ay kulanka lugta hore ku adkaatay 3-0.
Hadaba Mario Balotelli ayaa fariin uu ku soo qoray boggiisa rasmiga ah ee Instagram wuxuu ku difaacay Lionel Messi, isagoo dhinaca kale hambalyo u diray saaxiibadiis horey ee kooxda Liverpool wuxuuna yiri:
“Messi waa ciyaaryahan ka yimid meel ka baxsan adduunka, inkastoo uu qaatay kulan xun ee aad u adag”.
“Cristiano Ronaldo ayaa ah ciyaaryahanka ugu fiican adduunkan, inkastoo uusan ciyaarin kulamada wareega afar dhamaadka”.
“Waxyaabaha kale waa hadal faaruq ah, ma awoodid inaad ka sheegto waxyaabo xun labadan ciyaaryahan, sababa la xiriira inay six un u ciyaareen kulan, ama ay soo gaartay guuldaro lama filaan ah, taasi waxay noqon doontaa waali”.
Mourinho oo dhaleeceeyay tababaraha Ajax kaddib markii ay ka hareen Champions League
10 ciyaaryahan oo qarka u saaran inay ka tagaan kooxda Barcelona xagaagaan